Taranja lomano : Tanterahina eto Mahajanga ny fiadiana ny tompondakan'i Madagasikara
Natomboka omaly 13 aprily ny lalao fiadiana ireo ho tompondakan'i Madagasikara amin'ny taranja lomano ary tsy hifarana raha tsy ny sabotsy 15 aprily izao. Mpilomano miisa 290 avy amin'ireo ligy 4 no hifaninana mandritra ny 3 andro. Tsy nahatonga mpifaninana kosa ny ligy avy any amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany.
Mbola olana ho an'ity taranja ity eto Madagasikara ny tsy fananana foto-drafitrasa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Ho an'ny dobo 100 m ohatra dia Antananarivo sy ny ao Toamasina ihany no manana ary manodidina ny folo eo ho eo ny 25 metatra manerana ny Nosy.
Etsy ankilany, any afovoan-tany no manana mpilomano betsaka kanefa iaraha-mahalala ny toetr’andro mandritra ny vanim-potoana ririnina. Irian'ireo mpilomano ny hanana foto-drafitrasa mifanaraka amin'izany.
Madagasikara dia nosy voadidona ranomasina ary dia betsaka ireo tanora no mahay milomano fa dia lomano ara-drazana tsy misy tekinika avokoa.